बाजुराका बजारमा अवैध औषधि - Radio Tribeni FM
बाजुराका बजारमा अवैध औषधि
थाभावी औषधि सेवनले ज्यान जोखिममा
गगन अयडी/ बाजुरा, २६ भदौ
बडिमालिका नगरपालिका–७ कोर्धकी ३२ वर्षीया धौली लुवार जथाभावी औषधि सेवनबाट जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेकी छिन् । समदरमुकामको एक मेडिकल पसलबाट लगेको गर्भपतनको औषधि सेवनबाट उनी यो अवस्थामा पुगेकी हुन् ।
उनले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराको गेटनजिकै रहेको मष्टामहादेव आयुर्वेद पसलबाट १५ सय रुपैयाँमा गर्भपतनको औषधि लगेकी थिइन् । सोही औषधि खाएर असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा उनी जिल्ला अस्पताल बाजुरामा जीवनमरणको दोसाँधमा छटपटाइरहेकी छिन् । धौलीले ६ दिनअघि मष्टामहादेव आयुर्वेदबाट गर्भपतनको औषधि लगेर खाएको बताइन् । औषधि सेवनको केही समयमै उनको यौनांगबाट अत्यधिक रक्तश्राव भएको र यो क्रम दुई दिनसम्म जारी रहेको उनले बताइन् । उनको अवस्था गम्भीर भएपछि मात्रै परिवारले जिल्ला अस्पताल बाजुरामा ल्याएको स्वास्थ्यकर्मीले बताए । अत्यधिक रक्तश्रावका कारण उनको ज्यान जोखिममा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. मोहन नाथले बताए ।
रगत अभावले उपचार प्रभावित
उपचाररत धौलीको रगतमा ३ दशमलव ८ पोइन्ट मात्रै हेमोग्लोबिन रहेको अस्पतालले जनाएको छ । ‘यो निकै कम हो,’ कार्यालय प्रमुख डा. मोहन नाथले भने । गर्भपतन वा सुत्केरी महिलामा ८ पोइन्टभन्दा तल हेमोग्लोबिनको मात्रा घटेमा ज्यान जोखिमा हुने गर्छ । रक्तअल्पताका कारण धौलीको ज्यान जोखिममा छ भने अर्कोतर्फ उनलाई रगत दिने व्यक्तिसमेत नपाएको अस्पतालले जनाएको छ । यता, मष्टामहादेव आयुर्वेदले गर्भपतनको औषधि बिक्री गर्न नपाउने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । ‘माष्टामहादेवले आयुर्वेदिक औषधि मात्रै बिक्री गर्न पाउँछ । यति मात्रै होइन, बाजुराका कुनै पनि पसल वा फार्मेसीले यस्तो औषधि बिक्री गर्न पाउँदैनन्,’ जिल्ला स्वास्थ्यका एक कर्मचारीले भने ।
माष्टामहादेव आयुर्वेदका सञ्चालक मोहनबहादुर धामीले मिफेप्रिस्टोन २०० एमजी र मिसोप्रोस्टल २०० एमसिजी नामक औषधि बिक्री गरेको बताएका छन् । उनले यस्तो औषधि बिक्रि गर्न पाउने-नपाउनेबारे केही थाहा नभएको बताए ।
धौली मात्रै होइन, बाजुरामा यसरी जथाभावी औषधि सेवनको सिकारमा कैयौँ व्यक्ति पर्दै आएका छन् । सुरक्षित गर्भपतन गर्नका लागि सरकारले व्यवस्था गरे पनि महिलाहरू यसरी गैरकानुनी गर्भपतन गरिरहेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख डा. गुणराज अवस्थीका अनुसार गाँउघरमा गैरकानुनी रूपमा एचए, अहेब, अनमी र अरू स्वास्थ्यकर्मीले समेत गर्भपतन गराइरहेका छन् । कानुनतः १२ सातासम्मको मात्रै गर्भपतन गराउन पाइन्छ । अवस्थीका अनुसार त्यसमा पनि शारीरिक र मानसिक अवस्था ठीक भए मात्र गर्भपतन गराउनुपर्छ । तर, कुनै परीक्षणविना नै औषधि खुवाएर गर्भपतन गराउने आम चलन छ । धेरै रगत बग्ने, तल्लो पेट दुख्ने, गनाउने पानी आउने समस्या हुनु यसैको परिणाम भएको उनले बताए ।
अनुगमन भएको याद छैन : जिल्ला अस्पताल
मध्य तथा सुदूरपश्चिमका औषधि पसलको अनुगमन गर्ने जिम्मा औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगन्जले पाएको छ । नेपालगन्जले यो क्षेत्रका २४ जिल्लाको अनुगमन गर्नुपर्छ । तर, विभागले अहिलेसम्म बाजुरामा अनुगमन गरेको थाहा नभएको जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. मोहन नाथले बताए । यस्तै, औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगन्ज प्रमुख मेनु श्रेष्ठ भने अनुगमन गर्न औषधि निरीक्षक अभाव भएको बताउ“छिन् । उनले भनिन्, ‘२४ जिल्ला हेर्ने तीनजना निरीक्षक छौँ । त्यो पनि एकजना कार्यालय प्रमुखसहित ।’ श्रेष्ठले थपिन्, ‘एकजनाले अफिसको काम हर्नुेपर्छ । दुईजनाले सबै ठाउँमा कसरी अनुगमन गर्नु ?’
Copy : Naya patrika